FANAFENANA AN’I TANIA: « Valifaty » no antony - Journal Madagascar
Omaly 18 novambra 2019 no hita i Tania ary ny vehivavy niaraka tamin-drainy no nanafina azy tany Antanifotsy rehefa natao ny fanadihadiana. Tsy naninona ity zaza ity satria rehefa nanontaniana izy dia niteny fa tsy nampijaliany. Nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety ny sampandraharaha misahana ny zaza tsy ampy taona sy ny heloka mamoafady eny Tsaralalana androany 19 novambra 2019 teny Anosy momba ity raharaha ity. Araka ny fanazavan’ny lehiben’io sampandraharaha io, Commissaire Andriamiandra Fidy fa adina mpivady no fototry ny fanafenana an’i Tania. Rehefa natao ny famotorana dia efa nisaraka elabe ny ray sy ny renin’i Tania. Niaraka tamina vehivavy hafa taorian’izany ny rainy ary nifampitondra tahaka ny mpivady izy ireo. Io “vadiny faharoa” io no naka ity zazavavy kely ity tany am-pianarana ary nanafina azy. “Rehefa nohadihadiana io nanafina an’i Tania io dia nilaza izy fa nentina nanaovana valifaty ny fanafenana azy satria nampijaly azy rangahy ary naafaka ny zaza tao an-kibony izany”, hoy ny fanazavan’i Commissaire Andriamiandra Fidy.
Nambaran’i Commissaire fa nahafantatra ny dadan’i Tania fa nafeniny sipany ny zanany. Nanafatra ny renin-janany anefa izy mba tsy hitory fa hoe kristianina. Araka ny fanazavan’ny tomponandraikitra ao amin’ny polisim-pirenena fa azo enjehin’ny lalàna ny olon iray raha toa ka mahafantatra olona manao fandikan-dalàna kanefa tsy manondro azy. Tsy “kidnapping” no nahazo an’i Tania fa “sequestration” hoy izy satria alaina an-keriny sy angalana vola no atao hoe : “kidnapping” ary alaina sy afenina no atao hoe: “sequestration”. Natolotra ny fampanoavana androany 19 novambra 2019 ny renin’i Tania, ny rainy, ny “sipa” niaraka tamin’ny rainy sy ny anadahin’ity vehivavy ity.
Raha ny tarehimarika nomen’ny sampandraharaha misahana ny zaza tsy ampy taona sy ny heloka mamoafady eny Tsaralalana fa 956 ny isan’ny fanamabarana zaza very voaray tamin’ity taona 2019 ity. Voafaritra fa 637 amin’ireo fitsoahana tokantrano ary 319 ny tsy fahitana zaza. Ny 779 nampahafantarina fa tafaverina an-tokantrano, roa maty ary ny ambiny misy miverina ihany fa tsy nampahafantarin’ny ray aman-dreniny.